बेसबल सट्टेबाजी गर्न गाइड - Victor Mochere
फुटबलको विपरीत, उदाहरणका लागि, बेसबलमा धेरै खेलहरू छन् जसको अर्थ त्यहाँ बाजी लगाउने र केही नगद जित्ने थप अवसरहरू छन्। कुल मिलाएर, मेजर लिग बेसबल (MLB) टोलीहरूले जम्मा 2,430 नियमित-सिजन खेलहरू खेल्नेछन्। बेसबल खेल सट्टेबाजीको एक विविध क्षेत्र हो किनकि यसले खेलका धेरै भागहरू बाजी लगाउनको लागि प्रस्ताव गर्दछ जब उनीहरूले अनलाइन खेल पुस्तक मार्फत खोजी गर्छन्।
यहाँ परम बेसबल सट्टेबाजी गाइड छ।
2. रन लाइन
4. पहिलो5इनिङ्स लाइन
5. प्रोप बेट्स
मनीलाइन शर्तले कुन टोलीले खेल जित्ने सम्भावना बढी छ भनेर मात्र हेर्छ। मानौं LA डजर्सले टेक्सास रेंजर्स विरुद्ध सामना गरे, सट्टेबाजहरूले को मनपर्ने र को अण्डरडग हो भनेर सुझाव दिने बाधाहरू प्रस्ताव गर्नेछन्। यो केहि यस्तो देखिन सक्छ;
टेक्सास रेंजर +200
मनपर्ने को हो र अण्डरडग को हो बुझ्नको लागि, हामीले संख्याको अगाडिको प्रतीकलाई हेर्नु पर्छ। माइनस चिन्हले यो टोली मनपर्ने हो भनी सङ्केत गर्छ र अण्डरडगलाई प्लस चिन्हले देखाइएको छ। संख्याहरू सधैं $ 100 को सम्बन्धमा छन्। त्यसोभए, यदि तपाइँ मनपर्ने LA Dodgers मा -350 मा बाजी लगाउन चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ जित्न चाहानु भएको प्रत्येक $ 350 को लागी $100 मा शर्त लगाउनुपर्छ। उल्टो अर्थमा, यदि तपाईंले टेक्सास रेंजर्समा कम्तीमा $100 बाजी लगाउनुभयो र जित्नुभयो भने, तपाईंले यस अवस्थामा $200 कमाउनुहुन्छ। यो बेसबल सट्टेबाजी को सबैभन्दा आधारभूत रूप हो।
यो पोइन्ट-स्प्रेडको बेसबलको संस्करण हो। यसले मानक शर्त लिन्छ जुन मनीलाइन हो, र यसमा थोरै अतिरिक्त दांव थप्छ। खेल भन्दा पहिले, एक टोलीलाई 1.5 रनको फाइदाको लागि चयन गरिन्छ किनभने बेसबल सामान्यतया कम स्कोर गर्ने खेल हो। यदि हामीले अन्तिम शर्तबाट उदाहरण लियौं भने, यो यस्तो देखिन्छ;
टेक्सास रेंजर्स -1.5
तसर्थ, यदि तपाइँ मनपर्ने LA Dodgers मा सट्टेबाजी गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ तिनीहरूलाई2वा बढी रनले जित्न आवश्यक छ। त्यसोभए यदि तपाइँ टेक्सास रेंजर्स हो भने, तपाइँले एक मात्र (1.5 भन्दा कम) दौड वा जित्नु पर्छ।
बेसबल कहिले पनि भविष्यवाणी गर्न त्यति सीधा हुँदैन, यो उच्च स्कोरिङ हुनेछ वा होइन भन्ने प्रश्न सहित। कुल सट्टेबाजीले संयुक्त रनको कुल संख्यालाई हेर्छ। खेलकुद पुस्तकहरूले यो कुलको नतिजाको आधारमा प्रस्ताव गर्नेछ। त्यसोभए हाम्रो उदाहरणमा डजर्स बनाम रेंजर्स, यो केहि यस्तो देखिन सक्छ;
7.5 भन्दा बढी
यदि तपाइँ '7.5 भन्दा माथि' मा सट्टेबाजी गर्दै हुनुहुन्छ भने, यसको मतलब तपाइँ खेलमा 8 वा बढी रनहरू भविष्यवाणी गर्दै हुनुहुन्छ, जबकि यदि तपाइँ '7.5 मुनि' मा सट्टेबाजी गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि खेलले कुल7रन भन्दा बढी देख्नेछैन।
पूरै खेलको नतिजामा बाजी लगाउनुको सट्टा, धेरैले पहिलो5इनिङ्समा ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छन्। यसले चाखलाग्दो पिचिङ लाइन-अपको रूपमा वा बुलपेनबाट बच्नको लागि चासो लिन सक्छ। उस्तै प्रकारको बाजी लाग्न सक्छ, जस्तै पहिलो ५ इनिङ्सको विजेता (मनी लाइन बेटको रूपमा) वा कुल स्कोर (जस्तै कुल बाजी)।
प्रोप बेट्सहरू सट्टेबाजीका थप अनुकूलित प्रकारहरू हुन्। तिनीहरू विशिष्ट चीजहरूमा केन्द्रित हुन्छन् र धेरै फरक भविष्यवाणीहरूको दायरा हुन सक्छन्। यो कुनै खास खेलाडीले X मात्रामा हिट प्राप्त गर्ने र X कसरी रन गर्छ भन्ने कुरा प्राप्त गर्छ वा गर्दैन, वा कुनै निश्चित खेलाडीले कति घरेलु रन वा स्ट्राइकआउटहरू प्राप्त गर्नेछ भन्ने कुराको रूपमा आउन सक्छ। यसले फ्युचर्स बेट्स भनिने कुरालाई पनि विचार गर्छ, र यसमा स्पष्ट विश्व शृङ्खला विजेता, लीग पेनन्ट विजेता, वा MLB' MVP को हुनेछन्।
त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छन् जब यो बेसबलमा सट्टेबाजीको लागि आउँछ, र त्यहाँ धेरै सुझावहरू छन् जसले अनुभवलाई थप लाभदायक बनाउन मद्दत गर्न सक्छ। ठूला मनपर्नेहरूलाई बेवास्ता गर्ने र डिभिजनल अन्डरडगहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नदेखि, मौसम र अम्पायरहरू जान्नसम्म, त्यहाँ धेरै थोरै-जान्नुपर्ने कुराहरू छन् जसले MLB को आगामी सिजनको लागि थप सटीक भविष्यवाणीहरू गर्न मद्दत गर्न सक्छ। धेरै खेलहरूको साथ, बेसबल खेल जुवा खेल्नेहरूको लागि शीर्ष आकर्षण हो। र समान रूपमा प्रशंसकहरूका लागि, खेलमा सट्टेबाजी मनोरञ्जन स्तरहरू बढाउने अर्को तरिका हो।
CBD तेलको साथ खाना पकाउन गाइड